မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ:ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳလှန်လိင်ဂိမ်းများ! သင်ဖြစ်နိုင်မှန်းဆ၍ဤနေရာ၊ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းလူစွမ်းရည်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်၏အချို့အပူဆုံး XXX ခေါင်းစဉ်လှည့်ပတ်ဖို့ချည်နှောင်လျက်ရှိသူတို့ကိုခိုင်မာသာေဘာင္းဘီ။ ကျနော်တို့ယူကာလပတ်လုံး၊ကြိုးစားကြည့်မှာအမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အရပ်ထွက်ရှိပါတယ်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်ကောင်းစွာ၊ကိုယ့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကပိုကောင်းထက်အခြားလူတိုင်း! ကျွန်ုပ်တို့၏ဒဿကတည်းကဖွဲ့စည်းကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများကိုဂိမ်းကစားထွက်ရှိဖို့လက်လှမ်းအတူအလွန်အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်း။, ကျနော်တို့ဖျားနာ၏cowboys၏အားသာချက်ယူလပ်စျေးကွက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအသိမှလူမရှိလျှင်၊သို့မဟုတ် maybes။ ကျွန်တော်တို့စုဝေးစေအများကြီးတစ်ငရဲ၏အရင်းအမြစ်များနေရာနှင့် pooled အကောင်းဆုံးအမည်များဂိမ်းအတွက်ဒါကြောင့်သင်သာကိုခံယ၊နှင့်အများဆုံးပျော်စရာ၊အပြန်အလှန်ကာမဂုဏ်။ ဖိတကယ်အဘို့အပေါ်အခြားနေရာပြတဲ့အထိအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်–ကြာကြာပေါ်ဝင်၊ပိုကောင်းကြှနျုပျတို့ရနဲ့၊ဒုတိယအ၊အပိုပြီးဖွယ်ရှိကျွန်တော်တို့ပေးပို့ဖို့ဒီလာမယ့်အဆင့်အထိ။, သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လာမှတစ်ဦးဆုရှင်နှင့်အတူအဆုံးစွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fetishes ခံရရုံအကွာနှိပ်ပါ? ထို့နောက်စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်၊သို့မဟုတ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်အခုအချိန်မှာ၊ဘယ်လိုကျနော်တို့အမှုအရာ!
ကနေရသွားချင်ကြောင်းတည်ထောင်ပြီးကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပေးခြင်းပြန်ဂိမ်းအသိုင်းအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဒေတာဘေ့စ–အစဉ်အမြဲနဲ့အမြဲတမ်း။ ဟိုဒီမှာစိတ်ကူးချင်တေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်၏စနစ်:ဒါဟာအတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးအတြက္ဆိုပါကအဆိုပါဂိမ်းအခမဲ့။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤလူအပေါင်းတို့သည်ပြန်လာဖို့မက်:ကျွန်တော်တို့ရသင့်ငွေမီသင်ခဲ့ဖူးပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်ရန်မအစစ်အမှန်အကြောင်းပြချက်စောင့်ရှောက်ဖို့သင်ပျော်ရွှင်၊မှန်သော?, ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့စောင့်ရှောက်ပတ်ပတ်လည်သင်နှင့်အလျှင်ခက်ခဲတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်ပါဘူးထောပတ်သင့်ရဲ့ parsnips! ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့လက်တွေအများကြီးစိတ်ဖိစီးမှုအမှန်တကယ်အကယ်ဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကထွက်ထားမှကယ်လွှတ်ပြီး၊နောက်ထပ်အကြောင်း၊ပြပွဲလူတိုင်းထွက်ရှိသောကျွန်တော်တို့၏နိုင်စွမ်းပေးဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံနှင့်ခံစားချင်တယ်။ ကျွှန်တော်ဘာမှမမှာရပ်တန့်၊နှင့်၏အစိတ်အပိုင်းအမှန်ကကျွန်တော်ပေးထားတယ်အကွာအဝေးအတိအကျအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်။, ဘယ်အရာမှအတွင်းလိုအပ်သည်ဝယ်ယူကစားရန်ဖြစ်စေ–ဤအလှန်လိင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအနိုင်ရမှပေးဆောင်ဖို့အင်္ဂါရပ်စကားပြော၏!
ကျနော်တို့ချစ်ပေးဂိမ်းကစားထွက်ရှိပါတယ်နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအလှန်အတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်ဒုတိယအကြောင်း၊ငါတို့သည်လည်းချစ်သူတို့သေချာပြီအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊အပြန်အလှန်လိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်မောနိုင်မပန်းအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အသည်းအသန်ဖြစ်ရန်တတ်နိုင်သမျှအကိုလူတိုင်းမကယ်တာအကောင်းဆုံးကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအတွက်အမြင်အာရုံဌာန။ နေဆဲဒီအတွက်အာကာသတခြားနေရာတကယ်လိုအပ်ချက်များကိုအဆင့်တက်ကတည်းက၊ကျနော်တို့အခုန်နှင့်စည်းလံုး–rivalling အကြည့်အများအပြားခေတ်ရေစီးကြောင်းစီမံကိန်း၊မနည်း!, အများကြီးအောင်မြင်မှုအကြွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခါကလူတက်လက်မှတ်ထိုးဒီမှာကစား၏ဂိမ်းများ၊သူတို့ကမြင်သောအစိတ်နှင့်အရည်အသွေးလျှောက်ထားဖို့အကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်ရရှိပါသည်။ ကျွန်တော်အောက်မှာလည်ပတ်တင်းကြပ်သောစည်းကမ်းချက်များကိုရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး–အဘယ်သူမျှမမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်။ အမြင်အတွက်ကဒီမှာလှည့်လည်ရန်ဖြစ်ကောင်းသင်ပေးမည်ဟုအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး၏အဘယ်အရာကိုသင်ရဖို့သင့်ရဲ့အချောထုတ်ကုန်လည်း:အလှန်လိင်ဂိမ်းများလုံးဝသတ်မှကြွလာသောအခါဤထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးခြင်းမိတ်ဆွေထွက်ရှိသုံးစွဲသည်အဘယ်သို့ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အခါ၊သူတို့ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းအစွန်းရောက်ဂရပ်ဖစ်ကျနော်တို့ရရှိပါသည်!, ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်ချက်ကြောင်းလျှင်သင်အပေါ်အနိမ့်ဆုံးကွန်ပျူတာ၊သင်ဆဲကြီးမြတ်အချိန်ရှိသည်မှာအလှန်လိင်ဂိမ်းများ:သင်ဟာကိုယ့်သုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သပ္ပါယ်အရည်အသွေးပြင်ဆင်ခြင်းအရာဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ႈဆင်းအနည်းငယ်မှကိုက်ညီ၏။
လှန်လိင်ဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းပတ်ပတ်လည် ၂၃ ခေါင်းစဉ်အခုအချိန်မှာ:အားလုံးအရာ၏လုံးဝအလှန်ရန်နှင့်ပိုကောင်းသေး၊ဖန်တီးသာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းတကယ်သတ်မှတ်အမျိုးအစားများ၏အပြန်အလှန်:သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိစ္စဒီမှာ၊သင်လိုပါလိမ့်မယ်ဖြုန်းဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးအချိန်သေချာသောဆင်းသွားလမ်းမှန်ရဖို့အဆိုပါရလဒ်သင်မျှော်လင့်။ ဒါဟာအကြွင်းမဲ့အာဏာအတွက်ဦးစားပေးပြီးတင်ပြဖို့အကောင်းဆုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု-အခြေခံဂုဏ်ဂိမ္း၊ဒါကြောင့်သေချာအောင်ကျေးဇူးပြုဖို့အဆင်သင့်လုပ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခု!, ကျွန်တော်အဖုံးတစ်လျောက်ပတ်သောအရေအ niches ဒီမှာ၊ဒါပေမယ့်အပ်သွားဖို့ပြောဘဲမရှိဘဲအကြောင်း၏အဓိကအာရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စပေါ်ချိန်းတွေ့ simulators နှင့်အလားတူထုတ္ျ။ တဖန်:အဆိုပါရွေးချယ်မှုလုပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အရာ NPCs နိုင်မင်း၊ကိုတည်နေရာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ချွေတာလည်းအကြံပြုချက်ဒီနေရာမှာသေချာအောင်သင်သည်သော့ဖွင့်အားလုံး၏အ storylines။ အဲများများအတွက်ပေါ်မယ့်အမှာဒေတာဘေ့စအလှန်လိင်ဂိမ်းများ၊သေချာသည်။
ငါမျှော်လင့်ပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမယ့်ငွေဒေနာရိရန်ခဲယဉ်းလုံလောက်တဲ့ဒီမှာအပေါ်အလှန်လိင်ဂိမ်းများကြောင့်၊ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချစ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးနှင့်အတူတက်လာနှင့်ငါပြုသည်အထင်ဒါဟာတစ်ကြီးမြတ်ရလိမ့်မည်ဟုအရာအမှန်ပင်ရှိသည်ဖို့ပိုပြီးလာမယ့်လူမျိုးများနှင့်တွေ့အကြုံအတွက်။ ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားင့်အဖြစ်ပြသနိုင်ဖို့တတ်နိုင်သောကမ္ဘာမှကြွလာသောအခါအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားအွန်လိုင်း၊အပြန်အလှန်လိင်ဂိမ်းများသည်သာအရပ်လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်၊သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်အခုအချိန်မှာမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊သင်အောင်ပါလိမ့်မယ်အချို့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိမ့်မည်ဟူသောပိန်သင့်ရဲ့အနာဂတ် jerking ပစ္စည်း? သံကဲ့သို့တောက်ပစိတ်ကူးကဒီမှာ!, ဒါကြောင့်၊ဂုဏ်အလာတစ်လျှောက်နှင့်အောက်မေ့သတိရ:အလှန်လိင်ဂိမ်းများအမြဲတမ်းအားဖြင့်ပတ်လည်ဖြစ်သွားရောက်စေဖို့သင်လတ်ဆတ်နှင့်အတူအပူဆုံး။ မိဿဟာယ၊ချစ်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင် jerking၊သူငယ်ချင်းများ!